असार २६, २०७७ | राजेन्द्र दाहाल
सामान्यतः गल्ती गर्नुलाई नराम्रोर-अवाञ्छनीय मानिन्छ । त्यसैले अपेक्षा गरिन्छ— मान्छेले कुनै पनि गल्ती नगरोस् । सिकाइका क्रममा बालबालिकाले गल्ती गर्दा शिक्षक हैरान हुन्छन् । कतिपय शिक्षक आफ्नो हैरानी—असन्तुष्टि बालबालिकामाथि यसरी पोख्छन्— ‘मूर्ख, यत्ति पनि आउँदैन, गोबर भरिएको... ।’ तर कतिपय शिक्षकहरू चाहिं गल्ती गर्दागर्दै पनि बालबालिकाले सिक्छन् भन्ने मान्छन् र गल्ती गर्नेलाई फेरि सिकाउने–सम्झाउने काम गर्छन् । शिक्षाशास्त्रीहरूको विचारमा सिक्ने क्रममा स्वाभाविक रूपमै गल्ती हुन्छन्, यस्ता गल्तीको उपयोग सिकाउनकै लागि गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ ।
सिकाइ र सिकाइको क्रममा हुने गल्तीका सम्बन्धमा फारसी भाषामा सन् १३२०–२२ तिर लेखिएको सुफी ग्रन्थ ‘फबाईलदुल फुआद’ मा एउटा चाखलाग्दो प्रसंग भेटिन्छ । त्यस अनुसार, सुफी सम्प्रदायमा मान्छे दुई किसिमका हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ— पहिलो, जसले कहिल्यै गल्ती गरेको छैन अनि दोस्रो, जसले गल्ती गरेर पनि आफूलाई सुधारेको छ । तर, यी दुईथरीमध्ये राम्रो वा असल कसलाई मान्ने ?
यो प्रश्नको जवाफ सुफी विद्वान ख्वाजा निजामुद्दीनले अर्को उपकथा जोडेर यसरी दिएको पाइन्छः
‘एक पटक गल्ती गर्दै नगर्ने मानिस ठूलो/असल हो कि गल्तीबाट पाठ सिकेर आफूलाई सुधार गर्ने मानिस असल हो भन्ने विषयमा दुई भद्र पुरुषबीच चर्को विवाद पैदा भएछ । जति बहस गर्दा पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि उनीहरू फैसला गरिदिनुपर्‍यो भनी त्यहाँका सर्वमान्य व्यक्ति (मसिहा) लाई गुहार्न पुगे । मसिहाले यो विषयमा आफूले केही पनि भन्न नसक्ने तर बाटोसम्म देखाइदिन सक्ने भन्दै ती दुवै व्यक्तिलाई त्यस राति सँगसँगै बस्न र बिहान घरबाट बाहिर निस्किँदा जोसँग पहिलो भेट हुन्छ, आफ्नो प्रश्नको जवाफ उसैसँग सोध्नू भनेर पठाइदिए ।
मसिहाको आदेश बमोजिम सँगै रात बिताएर ती व्यक्तिहरू बिहान सबेरै सडकमा निस्किए । त्यहाँ उनीहरूले सर्वप्रथम एउटा अधबैंसे पुरुषलाई भेटे । त्यो पुरुषको नजिक पुगेर उनीहरूले आफ्नो प्रश्न दोहोर्‍याउँदै सोधे— “यी दुईथरीका मानिसमध्ये कुन राम्रो— जसले कुनै गल्ती/त्रुटि गरेकै छैन अथवा जसले गल्ती/त्रुटि त गरेको छ तर आफ्नो गल्ती थाहा पाएपछि आत्मसात् गरेर आफूलाई सुधारेको या भविष्यमा त्यस्तो नदोहोर्‍याउने प्रण गरेको छ ?”
प्रश्न सुनिसकेपछि त्यो मानिसले अलि झिंजो माने झैं गरी भन्यो— “ए ! म एउटा अनपढ जुलाह (बुनकर) लाई यस्ता कुरा के थाहा हुन्छ र ? मैले त कपडा बुन्न मात्र जानेको छु । जहाँसम्म कपडा बुन्दाको कुरा छ; कपडा बुन्दा बारम्बार धागो चुँडिन्छ । चुँडिएको ठाउँमा गाँठो पारेर धागो गाँस्दै लुगा बुन्नुपर्छ । हो, चुँडिएपछि गाँठो पारेर जोडेको धागो नचुँडिएको धागोभन्दा बलियो हुन्छ । खासमा धागो चुँडिनु भनेको त्यसको कमजोर भाग पहिल्यै थाहा हुनु पनि हो । त्यस्तो कमजोर ठाउँमा गाँठो पारिदिंदा धागो साँच्चै मजबूत हुन्छ; नचुँडिएको धागोभन्दा पनि मजबूत हुन्छ । अनि कपडा पनि बलियो हुन्छ ।”
जुलाहको जवाफ सुनिसकेपछि मसिहाले ती दुई व्यक्तिलाई भने, “तिमीहरूको प्रश्नको सही जवाफ त्यही हो ।”
हुन त सामान्य मानिसका आँखाले गाँठा–गुठी नभएको सग्लो धागोबाट बुनिएका कपडा नै राम्रो देख्छन् । तर लामो र सग्लो धागो भन्दा गाँठै–गाँठा भएको धागो बलियो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा बुनकरले जति अरू कसैले बुझदैन । बारम्बार धागो छिन्दा बुनकरलाई अवश्य पनि झन्झट हुन्छ, तर त्यति नगरे बलियो कपडा पनि त बुनिंदैन !
बालबालिकाको सिकाइ पनि काँचो–कमजोर धागोको कपडा बुनाइ जस्तै हो । बालबालिकाले सिक्ने क्रममा जति गल्ती गर्छन्, सुधार्ने मौका पनि त्यति नै पाउनुपर्छ । गल्ती गर्ने र सुधार्ने समान अवसरले उनीहरूको सिकाइ र बुझाइलाई धागोको गाँठो जत्तिकै बलियो, मजबूत तुल्याइदिन्छ । अनि ‘धागो चुँडिएको’ ठाउँमा गाँठो पारिदिन अर्थात् बालबालिकाले सिक्ने क्रममा गरेका गल्ती–त्रुटि सच्याइदिन शिक्षकले कहिल्यै झिंजो मान्नुहुँदैन । किनभने गल्ती गरेर त्यसलाई सुधार्ने बालबालिकाले नै अरूले भन्दा राम्ररी सिक्छन् ।
# शिक्षक मासिक
२०७१ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।